दुतहरू दुर्इ देशमा पठाइए पनि मूलत भारतका लागि हाे क. धर्मेन्द्र बास्तोला – eratokhabar
दुतहरू दुर्इ देशमा पठाइए पनि मूलत भारतका लागि हाे क. धर्मेन्द्र बास्तोला
ई-रातो खबर २०७३, १३ भदौ सोमबार ०५:१२ August 29, 2016 1173 Views
क. धर्मेन्द्र बास्तोला
नेपाल सरकारले दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनमा आफ्ना दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई विशेष दूतका रूपमा पठाउनुका खास कारण केलाई मान्नुहुन्छ ? परराष्ट्रमन्त्रीबिना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यसो गर्नुले यसको अदृश्य डिजाइनलाई सङ्केत त गर्दैन ?
भनिन्छ, प्रम प्रचण्डले आफ्नो विशेष दूत निधिमार्फत नेपाल सरकारको कामकारबाही र योजना समेटिएको चारबुँदे गोप्य पत्र भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीलाई उपलब्ध गराएका छन् । के एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका प्रमले अर्को राष्ट्रका प्रमलाई त्यसरी आन्तरिक विषय गोप्य रूपमा सम्प्रेषण गर्न मिल्छ ?
विशेष दूतमार्फत चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ एवम् भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण, नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एवम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको लगभग तय भएको बताइन्छ । यी भ्रमणहरूले नेपाल र नेपाली जनतालाई तात्विक रूपमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? के यसले राजनीतिक तथा परस्पर दौत्य सम्बन्धमा नयाँ उचाइ हासिल गर्ला ?
आज विश्वमा असंलग्न परराष्ट्र नीति र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व असफल भइसकेको छ । नेपालमा महेन्द्रकालीन राष्ट्रसङ्घीय उक्त प्रस्तावनालाई पुनव्र्याख्या गर्न आवश्यक ठान्नुहुन्न ?
टर्कीको पछिल्ला घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? विश्व शक्तिराष्ट्रहरूको टक्करका रूपमा पनि यसलाई हेर्ने गरिएको छ नि ?
भनिन्छ, नेपालमा अहिले मण्डले राष्ट्रवादको भ्रम फैलाइएको छ । यसलाई केपी ओलीले पछिल्लो चरणमा अलिकति नयाँ स्वरूपबाट उठाउन पनि खोजे । प्रगतिशील राष्ट्रवादको चर्चा नेपालमा धेरै पहिलेदखि नै हुँदै नआएको पनि होइन । अहिले प्रगतिशील राष्ट्रवादको अगाडि मण्डले राष्ट्रवाद हावीजस्तो देखिनुको कारण के होला ?
राजनीतिक वृत्तमा ओली सरकार चीनतिर ढल्केको र प्रचण्ड सरकार भारततिर ढल्केको विश्लेषण गरिन्छ । फेरि प्रचण्ड सरकार विशेषतः भारतीय योजनामा बनेको बताइन्छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै नयाँदिल्लीमा दीपावलीसमेत गरियो । यस्तो मनोविज्ञान र व्यवहारका साथ निर्माण भएको प्रचण्ड सरकारले अवलम्बन गर्ने वैदेशिक नीतिले नेपालको ओज र गरिमालाई बढाउन सक्ला ?
चीनको तुलनामा नेपाल र नेपाली जनताको अन्तरविरोध मूलतः भारतीय शासकसित बढी रहेको देखापर्छ । यसकारण पनि भारतसितको सम्बन्धमा निरन्तर उतारचढाव आइरहेको देखिन्छ । यसको खास कारण भारतीय शासकको हैकम हो वा नेपालका शासकको दलालीकरण हो वा छिमेकी देशहरूसितको सम्बन्धमा नयाँ परिभाषाको आवश्यकता ? भारततिर ढल्किँदा दलाल हुने र चीनतिर ढल्किँदा राष्ट्रवादी हुने हो र ?
नेपाली जनताले चीन र भारतसित नयाँ शिराबाट नयाँ सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइरहेका छन् । एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाअनुरूप पनि छिमेकी मुलुकसितको सम्बन्ध सोहीअनुरूप नयाँ स्तरमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्न ?
तपाईं नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता पनि हुनुहुन्छ । तपाईंको पार्टीले अवलम्बन गरेको वा गर्न चाहेको मूलतः चीन र भारतसितको सम्बन्ध कस्तो हो ?
नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न विशेषतः भारत र चीनसितको सम्बन्ध केकस्तो हुनुपर्ने तपाईंहरूको ठहर छ ? नेपालका क्रान्तिकारीहरूले यी देशका शासक र जनताबीच स्पष्ट विश्लेषण गर्दै आवश्यक सम्बन्ध र सङ्घर्षका आधारहरू तयार पार्नुपर्दैन ?
वैदेशिक सम्बन्ध भनेका राष्ट्रिय स्वाधीनता र समृद्धिसित जोडिएको विषय पनि हो । नेपाललाई स्वाधीन राष्ट्र बनाउन तथा समृद्धिको दिशातिर लैजान यसका विविध आयामहरू हुन सक्छन् । ती आयामका बारेमा स्पष्ट पारिदिनुस् न ?
नेपालका मूलधार भनिएका सञ्चारमाध्यमहरूले चीन र भारतका बीचको नेपालको सम्बन्धलाई आआफ्नै स्वार्थअनुरूप चर्चा गरिरहेका छन् । तिनले राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउनुका सट्टा अनेकतामा लगिरहेका छन् । त्यसलाई चिर्दै जनपक्षीय सञ्चारमाध्यमहरूले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा केकस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
दु्रतमार्ग भारतलाई दिने गोप्य सहमति
सैन्य अभ्यासपछि उत्तरकोरियाको चेतावनी